Leeshimaasiisii - Wikipedia
Template:Infobox medical condition Leeshimaayisiisii akkasumas leeshiimaani'oosii jedhamee kan katabammuu dhuukuuba prootoozoowaamaxanttuukan sanyii"Leeshiimaaniiyaa" fii kan hiida tiitiisa ciirachaa biffa muuraasatiin dhuufu dha. Dhuukkuubichii haaloola guguudoo 3 :Kuutaaniiyasii,muukookuutaaniiyeesii, yookiin Leeshiimaasiisii viisseeraalii tiin dhufa. Inii bifa kuutaaniiyasii alseerii googaa yeroo fidduu,muukookuutaaniiyeesii alseerrii googaa, affaanii, fi funyaani, fi inni viisseeraalii alseerii googaadhaan jalqabee, bodda irrati ho'aa qaammaa, hir'inaa seeloota dhigaa, guddina esspileenii fi tiiruu fiida.
Faalamnii, namootaa kan dhuufuu sanyii "Leeshiimaaniiyaa" goosa 20 tiin dha. Dhiibaan ballaa wantoota akka hiiyuumaa, hir'iina nyaattaa,ciirama dagalaa, fi guddina magaalootaa fidduu danda'a. Qoorannaan kana fakkatan hundinnuu maxantoota maaykiirooskoopii jala ilaaluun goodhamuu danda'a. Dabalataan, dhuukuubnii viiseeriyaali qoorannaa dhigaattiin goodhamuu danda'a.
Leeshiimaayisiisiin saaphanaa fara ilbisootaatiin waal'aanamee jala rafuun ittiifammuu danda'a. Tarkaafiileen tamsaa dhuukuubicha itttisuuf barbachisan faraa ilboosotaan fayadammun tisiisota ciiraachaa ajjeesuufi namoota faalaman wal'aanuun dha. Waal'aansii wabbaadammuu kan muurteesamuu, bakka dhuukuubichi umammee fi gosa "Leeyishimiiniyaa" fi goosa faalamichaa irrati. Qoorichootaa dhuukuubicha furuuf fayadamuu danda'aan keesa Lipoosoomaalii Amroofooteeriisiiniin isa tokkodaha, Makkaa peentaavaaleettii anttiimooniiyaaliisiinfipaaroomoomyiisiinii,fiimiilteefoosiinee.Dhuukuuba kuutaaneeyeesii, paaroomaaysiinii,filuukoonaazoolii, yookiin peentaamiidiineeyookiin buu'aa qabeesa.
Namootnnii gara miiliiyoona 12 ta'aanbiyoolee 98 kessatii faalamanniiruu. Dhiimoonii du'aa haarraa gara miiliiyoona 2 fi gidduu kuuma 20 fi 50 bara baraan muul'ata.  Namootni hama milliyoona 200 ta'aan: Eshiiyyaa,Kiibbaa fi giidduu gala Ameerriikkaa, fi Awuurooppaa Kiibbaa naanoolee dhuukuubiichii barammaa ta'eetii jiraatan keesa jirraatuu. Buufatnnii fayyaa aduunyaa qoorichoolee tookkoo tookkoo irratti gatti gadii'aanaa argateera. Dhuukuubichii binneensoota biiraa kan akka sarootafi binneensoota xiixiiqaa irrattii argamuu danda'a.
Waabbii[edit | Lakkaddaa gulaali]
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Leeshimaasiisii&oldid=31679"
This page was last edited on 23 Fulbaana 2019, at 03:36.